Waaheen Media Group » Falanqaynta Siyaasadda Xisbiyada Qaranka Somaliland iyo Sooyalkoda Taariikheed (W/Q: Mukhtaar Cabdi Cilmi)
Browse:Home Articles Falanqaynta Siyaasadda Xisbiyada Qaranka Somaliland iyo Sooyalkoda Taariikheed (W/Q: Mukhtaar Cabdi Cilmi)	Falanqaynta Siyaasadda Xisbiyada Qaranka Somaliland iyo Sooyalkoda Taariikheed (W/Q: Mukhtaar Cabdi Cilmi)
Comments Off on Falanqaynta Siyaasadda Xisbiyada Qaranka Somaliland iyo Sooyalkoda Taariikheed (W/Q: Mukhtaar Cabdi Cilmi)	Sanadkii 2001 markii dadwaynaha reer Somaliland afti ku ansixiyeen dastuur dhigaya mabaadida dimoqraadiyadda waxay Somaliland u dhaqdhaqaaqday sidii ay u yagleeli lahayd nidaam dawladeed oo ku sal leh dimoqraadiyad ay hogaanka siyaasadda u hayaan xisbiyo siyaasadeed, Somaliland waxay qaadaty nidaamka xisbiyada badana sanadkii 2001 wakhtigaas oo xisibigi ugu horeyey ee la asasay uu ahaa xisbigi UDUB ee hada ka baxay gabi ahaanba saaxda siyaasada iyadoo ay ku xigeen ururo kale oo ay kamid ahaayeen xisbiga UCID iyo xisbiga hada talada haya ee KULMIYE.
Shirweyne ay qabsadeen xisbiga Ucid waxaa murashax madaxweyne loogu doortay aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyo ku xigeena waxaa loo dortay aqoonyahan Cabdirashiid xasan Mataan, dadaal badan oo ay sameeyen madaxdii iyo dhamaan murashixinta golayasha deeganka ee dalka oo dhan uga sharaxnaa xisbiga u UCID waxaa
uu ku soo baxay kaalintisii 3aad, waxaana markan ka horeyey xisbigii WADANI oo ka samaysay khilafki UCID galayna kalinta 2aad. Gushaa xisbiga UCID ee ka mid noqoshada xisbiyada qaranka waxay dhalisay in hadana ay isqabtaan gudoomiyihii xisbiga iyo murashaxii xisbiga taas oo kentay in hadana kisii xisbiga la geeyo Maxakamada Sare ee dalka kana gar naqdo, ugu damabyntii waxaa xusbigii loo xukumay Eng faysal cali warabe iyo garabkisii, halka garabkii kale Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ay ku bireen xisbiga Kulmiye.
Xisbiga Ucid oo ah xisbiga ugu da,da wayn asxaabta maanta jirta waxaa uu lumiyey dhamaan kalsonidii xildhibanada golaha baarlamanka oo tiradoodu ahayd 21 xildhibaan manna haysto hal xildhibaan oo ugu jira golahas,isla mar ahaantaa wax samaynah kuma laha dhamaan xeerarka kala duwan ee lagu ansxiyo aqalka baarlamanka somaliland, sidaa daradeed dib u habayn halagu sameyo hogaanka xisbiga oo ugu horeeyo in mesha u baneeyo Eng Faysal Cali Waraabe.
Waxaa uu xisbiga Ucid isna lumiyey dhamaan xildhibanadii golayasha deeganka ee dalka oo aynu ka war hayno inay ka mid yihiin mayarada Berbera iyo Gabiley kuwaas oo ku qanci wayay hananka ay wax u socdaan iyo hogaanka xisbiga ee heer qaran.
Ilaa hada lama soo bandhigin murashaxii madaxweyne ku xigeen iyo buugii lagu soo bandhigayay waxqabadka xisbiga Ucid iyadoo ay dorashadii ka hadhay wax ka yar 5 bilood ee taas oo ku tusaysa awood darada xisbiga iyo isku xidhnaan la.aanta madaxda ugu saraysa xisbigaas.
Hogaanka xisbiga Ucid hakudaydo hogaamiyayashii xisbiyada ee Daahir Riyaale iyo Madaxweyne Siilanyo oo warejiyey xisbiyadii ay hogaaminayeen mudada dheer
Hadii xisbiga Ucid uu sidan ku sii socdo waxaa hubaal inuu mari doono wadadii uu maray xisibigii guunka ahaa ee UDUB, kaas oo dhibatadisu salka ku haysay muran qalalase oo ka yimi xukun jacayl garabyo ugu sareyey xisbiga oo kala duwan ahaa….Lasoco xisbiga Wadani